सुरेश प्राञ्जली सापकोटा – मझेरी डट कम
प्रिय शङ्कर लामिछाने,
म तिम्रो लेखनबाट किन यसरी प्रभावित भएँ, मसँग उत्तर छैन । तिमी ‘स्यामुअल हन्टिङटन’ र ‘कार्ल पोल्यानी’ भन्दा पनि धेरै माथि छौं ।
जीवनको इतर एउटा दोसाँधमा अल्झिएको भोगाइ अभिषप्तता मुछिएको यो बिहान अभिनय गरिरहेछ सायद, ऊ मान्छे बुख्याँचा भएर । नोस्टाल्जियाको सुर्कनी फुकाएर रातभरि बटुलेको सपना स्वः हरूको पोल्टाबाट स्खलित भइरहेछ मानौँ ऊ ग्लेसिएर हो योबेला ।
युद्धमैदानः “ठोक् ! ठोक् !!” कमान्डर, आफ्ना मातहतका सिपाहीलाई आदेश दिँदै थियो । त्यो आदेश दिने कार्यसँग उसको कुनै रहर गाँसिएको थिएन । न त कुनै स्वार्थ नै । थियो त केवल बाध्यताको एउटा क्लेश । मध्यरात । माघको पूर्वार्द्ध, चिसोको चरमतामा उनीहरू युद्धजन्य बाध्यता बाँचिरहेका थिए । गोली, बारुदका अहर्निस आवाजहरू ।
आफ्नो राष्ट्रियता र पहिचान गुमाउनु पर्दाको पीडा कस्तो होला ? हदै भए कल्पनासम्म गर्न सक्छौं हामी । यथार्थमा पीडा अकल्पनीय नै हुन्छ । त्यस्तै ध्रुव सापकोटाको उपन्यास ‘अकल्पनीय’ को घटनावस्तु एउटी यस्ती नारी पात्रसँग गाँसिएको छ जसले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान नै गुमाउनु परेको छ । निर्वासित हुनुपरेको छ । सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै उपन्यासकी मूलपात्र पेमाको वरिपरि केन्दि्रत रहन्छ कथावाचन ।
अभि सुवेदीले अखबारी लेखनलाई पुस्तकको आकार दिएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध संगालो ‘निबन्धमा उत्तरवर्ती कालखण्डमा ८२ निबन्ध छन् । यसलाई रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको छ ।
आधुनिक निबन्धलेखनमा सिद्धहस्त मानिने शंकर लामिछानेले नेपाली साहित्यको जगमा असंख्य इँटा थपेका छन् । विशेषगरी नेपाली निबन्धलेखन परम्परामा भिन्न शिल्प र शैली लिएर उदाएका लामिछानेले आफू हिँड्ने बाटो आफंैले खने । नेपाली ‘नन फिक्सन’ को फाँटलाई उचाइमा पुर्‍याउने काममा उनको भूमिका अत्यन्तै उल्लेखनीय छ । नेपाली निबन्धमा ‘चेतनप्रवाह शैली’ -स्टि्रम अफ कन्सिअसनेस) लाई स्थापित गराउने लेखक हुन् उनी ।
उदीयमान एक बङ्गाली चित्रकार असीमकुमार घोषको ‘मोमिषा’ शीर्षकको चित्रकला प्रदर्शनी ।
एभाँगार्दे र दादावादका नयाँ संरचनाका चर्चाहरूसँगै कलाक्षेत्रमा देखिएका विविध प्रयोग ‘सर्रेलिज्म्’, अमूर्त अभिव्यञ्जनावाद, ‘फोटो रयिालिज्म्’, ‘जियोमेटि्रकल’ लगायत ‘मेटाआर्ट’ का विषयमा केन्दि्रत थियो कुराकानी ।
‘नया बाटो बन्नका लागि पुरानो बाटो भत्किनु या भत्काइनर्ुपर्छ ।’
-प्रिय पाठक, पात्रहरू खोज्ने क्रममा एउटा महासागरीय तटमा आइपुगेको छ यो लेखक यतिबेला नया शैलीहरूसगै विषयवस्तुको खोजी दोहोरनिे समय आइपुग्यो या पुगेन, त्यो जान्दिन“ म, भलै पाठक र लेखकबीचको वाञ्छनीय संयोजन नै ‘टेक्स्ट’ हुनुकोे अस्ितत्व भने जरुर हो ।